परमेश्‍वरले विभिन्न युगहरूमा विभिन्न नामहरू लिनुको अर्थ के हो? | सर्वशक्तिमान् परमेश्‍वरको मण्डली
5 जुन 2021
यहोवा परमेश्‍वरले हामीलाई पुरानो करारमा स्पष्टसँग बताउनुहुन्छ: “म, यहोवा नै हुँ; र म बाहेक कोही पनि मुक्तिदाता छैन” (यशैया ४३:११)। “यहोवा … सदासर्वदाको लागि मेरो नाम हो, र यो सारा पुस्ताको लागि मेरो स्मारक हो” (प्रस्थान ३:१५)। र तैपनि यसले नयाँ करारमा भन्दछ: “न त अरू कुनैमा मुक्ति छ: किनभने मानिसहरूका बीचमा हामीले मुक्ति पाउनलाई स्वर्गमुनि अरू कुनै नाउँ दिइएको छैन” (प्रेरित ४:१२)। “येशू ख्रीष्ट हिजो, र आज, अनि सधैँ उस्तै हुनुहुन्छ” (हिब्रू १३:८)। यसले पुरानो करारमा भन्दछ कि केवल यहोवा मात्र परमेश्‍वरको नाम हो र यसरी यो सदाका लागि रहनेछ। नयाँ करारमा, तथापि, यसले भन्दछ कि येशू नामद्वारा मात्र मानिसले मुक्ति पाउन सकिन्छ। किनकि व्यवस्थाको युगमा परमेश्‍वरको नाम यहोवा नै सदाको लागि उहाँको नाम हुनुपर्दथ्यो, त्यसोभए किन अनुग्रहको युगमा परमेश्‍वरलाई येशू कहलाइयो? यहाँ बाइबलमा उल्लेख गरिएको “सदाको लागि” भन्ने शब्दलाई हामीले कसरी बुझ्ने? परमेश्‍वरका नामहरूका बारे हामीले के सत्यता र रहस्यहरू बुझ्नुपर्दछ? यसको बारे अब सङ्गति गरौं।
किन यहोवा नाम येशू बन्यो?
कोही-कोहीले भन्छन्‌, “बाइबलमा यहोवा नाम सधैंभरि र सारा पुस्तासम्म रहिरहन्छ भन्ने कुरा स्पष्ट रूपमा अभिलेख राखिएको छ। तर जब प्रभु येशू आफ्नो छुटकाराको काम गर्न आउनुभयो, अब उसो यहोवा नामको उल्लेख गरिएन। सबैले प्रार्थना गरे र प्रभु येशूको नाम पुकारे, र तिनीहरूले येशू नाम पवित्र बनाए। यो किन हो?” यस्तो देखिन्छ कि बाइबलको यी विभिन्न भागहरूमा विरोधाभास छ, तर वास्तवमा त्यहाँ कुनै विरोधाभास छैन। यो किनभने परमेश्‍वरको नाम अपरिवर्तनीय छैन, तर उहाँको काम परिवर्तन हुँदा परिवर्तन हुन्छ। परमेश्‍वरले बोल्नुभएको “सारा पुस्ताको लागि” र “सदासर्वदाको लागि” शब्दहरू त्यो युगमा कामको सम्बन्धमा बोलिएका थिए। जबसम्म त्यस युगमा परमेश्‍वरको काम पूर्ण भएको थिएन, तब त्यो युगमा उहाँको नाम परिवर्तन हुने थिएन, र परमेश्‍वरलाई अनुसरण गर्ने सबैले त्यस युगमा परमेश्‍वरको नाम धारण गर्नुपर्थ्यो। केवल त्यस तरिकामा उनीहरूले पवित्र आत्माको काम प्राप्त गर्न सक्थे र परमेश्‍वरको रेखदेख र सुरक्षामा जिउन सक्थे। तर जब परमेश्‍वरले नयाँ युग सुरू गर्नुभयो र नयाँ काम प्रारम्भ गर्नुभयो, परमेश्‍वरको नाम पनि यससँगै परिवर्तन भयो। जब त्यस्तो भयो, केवल परमेश्‍वरको नयाँ नामलाई स्वीकार गरेर र परमेश्‍वरको नयाँ नाममा प्रार्थना गरेर मानिसहरूले परमेश्‍वरको अनुमोदन प्राप्त गर्न र पवित्र आत्माको काम प्राप्त गर्न सक्नेथिए। व्यवस्थाको युगमा, उदाहरणको लागि, परमेश्‍वरको नाम यहोवा थियो, र यहोवाको नाम धारण गरेर र यहोवाले घोषणा गर्नुभएका व्यवस्था र आज्ञाहरू पालन गरेर मानिसहरूले परमेश्‍वरको आशिष् र कृपा पाउन सक्थे। जब प्रभु येशू आफ्नो काम गर्न आउनुभयो, तथापि, उहाँले अनुग्रहको युग सुरू गर्नुभयो र व्यवस्थाको युगको अन्त्य गर्नुभयो, र यदि मानिसहरूले अझै पनि यहोवाको नाम धारण गरेर प्रभु येशूको नामलाई स्वीकार गर्न इन्कार गरेको भए, तब तिनीहरूलाई पवित्र आत्माले घृणा र अस्वीकार गरिने थियो, र तिनीहरू अन्धकारमा जिउने थिए। जसले प्रभु येशूलाई आफ्नो मुक्तिदाताको रूपमा ग्रहण गरे र पत्रुस, मत्ती र सामरी स्त्रीले जस्तै येशू नाममा प्रार्थना गरेर पुकारे, उनीहरूले पवित्र आत्माको काम पाए र प्रभुको मुक्ति प्राप्त गरे।
“सदासर्वदाको लागि” भनेको परमेश्‍वरको सार र स्वभाव कहिल्यै बदलिदैन, उहाँको नाम कहिल्यै परिवर्तन हुँदैन भन्ने चाहिँ होइन
सायद केही व्यक्तिहरूले परमेश्‍वरको नाम कसरी परिवर्तन हुन सक्छ भनेर सोच्दै, अझै अलिकति अलमल्लमा परेको महसुस गर्नेछन्, जब बाइबलमा यसले भन्छ “येशू ख्रीष्ट हिजो, र आज, अनि सधैँ उस्तै हुनुहुन्छ।” बाइबलमा लेखिएका “सदासर्वदाको लागि” शब्दहरू हामीले कसरी बुझ्नुपर्दछ? वास्तवमा, “सदासर्वदाको लागि”को मतलब परमेश्‍वरको सार र स्वभाव अपरिवर्तनीय छ भन्ने हुन्छ; यसको मतलब यो होइन कि परमेश्‍वरको नाम कहिले पनि परिवर्तन हुनेछैन। परमेश्‍वरका वचनहरूले भन्छन्: “केही मानिसहरू छन्, जसले परमेश्‍वर अपरिवर्तनीय हुनुहुन्छ भनी भन्छन्। यो सही हो, तर त्यसले परमेश्‍वरको स्वभाव र उहाँको सारको अपरिवर्तनीयतालाई बुझाउँछ। उहाँको नाउँ र काममा हुने परिवर्तनले उहाँको सार परिवर्तन भएको बुझाउँदैन; अर्को शब्दमा भन्नुपर्दा, परमेश्‍वर सधैँ नै परमेश्‍वर नै हुनुहुनेछ, र यो कहिल्यै परिवर्तन हुनेछैन। यदि तँ परमेश्‍वरको काम अपरिवर्तनीय छ भनी भन्छस् भने, के उहाँले आफ्नो छ हजार वर्षको प्रबन्ध योजना पूरा गर्न सक्नुहुन्छ? तँ परमेश्‍वर सदासर्वदा अपरिवर्तनीय हुनुहुन्छ भन्ने मात्र जान्दछस्, तर के तँ परमेश्‍वर सधैँ नयाँ हुनुहुन्छ र कहिल्यै पनि पुरानो हुनुहुन्न भनी जान्दछस्? यदि परमेश्‍वरको काम अपरिवर्तनीय छ भने, के उहाँले मानव जातिलाई डोऱ्याएर आजको दिनसम्म ल्याउन सक्नुहुनेथियो? यदि परमेश्‍वर अपरिवर्तनीय हुनुहुन्छ भने, उहाँले किन पहिले नै दुई युगको काम गरिसक्नुभयो? … ‘परमेश्‍वर अपरिवर्तनीय हुनुहुन्छ’ भन्ने शब्दहरूले परमेश्‍वरमा अन्तर्निहित रूपमा के छ र को हुनुहुन्छ भन्ने बुझाउँछ। जे सुकै होस्, तैँले छ हजार वर्षको कामलाई एक मात्र बिन्दुमा कब्जा गर्न सक्दैनस्, वा त्यसलाई मृत शब्दहरूमा सीमित गर्न सक्दैनस्। त्यसो गर्नु मानिसको मूर्खता हो। परमेश्‍वर मानिसले कल्पना गरेजस्तो सरल हुनुहुन्न, र उहाँको काम कुनै एक युगमा रहिरहन सक्दैन। उदाहरणका लागि, यहोवाले सधैँ परमेश्‍वरको नाउँलाई जनाउन सक्दैन; परमेश्‍वरले येशूको नाउँमा पनि आफ्नो काम गर्न सक्नुहुन्छ। यो परमेश्‍वरको काम सधैँ अगाडि दिशामा बढिरहेको छ भन्ने सङ्केत हो” (वचन देहमा देखा पर्नुहुन्छको “परमेश्‍वरको कामको दर्शन (३)”)। “परमेश्‍वर सधैँ परमेश्‍वर नै हुनुहुन्छ, र उहाँ कहिल्यै पनि शैतान बन्नुहुन्न; शैतान सधैँ शैतान नै रहन्छ, र त्यो कहिल्यै परमेश्‍वर बन्नेछैन। परमेश्‍वरको बुद्धि, परमेश्‍वरको आश्‍चर्यता, परमेश्‍वरको धार्मिकता, र परमेश्‍वरको महिमा कहिल्यै परिवर्तन हुँदैन। उहाँको सार र उहाँसँग जे छ र उहाँ जे हुनुहुन्छ त्यो कहिल्यै परिवर्तन हुँदैन। तर उहाँको कामको विषयमा भन्दा, यो सधैँ अगाडि बढिरहेको हुन्छ, सधैँ गहिरो हुँदै जान्छ, किनकि उहाँ सधैँ नयाँ हुनुहुन्छ र कहिल्यै पनि पुरानो हुनुहुन्न। हरेक युगमा परमेश्‍वरले नयाँ नाउँ धारण गर्नुहुन्छ, हरेक युगमा उहाँले नयाँ काम गर्नुहुन्छ, र प्रत्येक युगमा उहाँले आफ्ना सृष्टिहरूलाई उहाँको नयाँ इच्छा र नयाँ स्वभाव देखाउनुहुन्छ। यदि नयाँ युगमा, मानिसहरू परमेश्‍वरको नयाँ स्वभाव प्रकट भएको देख्न असफल हुन्छन् भने, के तिनीहरूले उहाँलाई सदाका लागि क्रूसमा टाँग्नेछैनन् र? र त्यसो गरेर, के तिनीहरूले परमेश्‍वरको परिभाषा दिँदैनन् र?” (वचन देहमा देखा पर्नुहुन्छको “परमेश्‍वरको कामको दर्शन (३)”)।
परमेश्‍वर सधैं नयाँ हुनुहुन्छ र कहिल्यै पनि पुरानो हुनुहुन्न, उहाँको काम निरन्तर अगाडि बढ्दछ, र उहाँको नाम परिवर्तन हुनासाथ उहाँको काम परिवर्तन हुन्छ। तर परमेश्‍वरको काम वा परमेश्‍वरको नाम जसरी परिवर्तन भए पनि, परमेश्‍वर सदासर्वदा परमेश्‍वर हुनुहुनेछ, र उहाँको स्वभाव र सार कहिल्यै परिवर्तन हुनेछैन। व्यवस्थाको युगमा परमेश्‍वरको नाम यहोवा थियो, र उहाँको नाम अनुग्रहको युगमा येशू थियो, तर उहाँको नाम जसरी परिवर्तन भए पनि, यो मानवजातिको मुक्तिको लागि मात्र परिवर्तन हुँदछ। मानवजातिलाई प्रबन्ध गर्ने परमेश्‍वरको उद्देश्य परिवर्तन हुँदैन र उहाँको सार परिवर्तन हुँदैन—यो केवल एक परमेश्‍वर हुनुहुन्छ जसले आफ्नो कार्य पुरा गर्नुहुन्छ। यद्यपि, युगहरू बित्दै जाँदा र परमेश्‍वरको कामको रूपान्तरणको साथ परमेश्‍वरको नाम परिवर्तन भएको थियो भनी बुझ्न फरिसीहरू त्यसबेला असफल भए, र तिनीहरू “केवल यहोवा परमेश्‍वर हुनुहुन्छ र उहाँबाहेक अरू कोही मुक्तिदाता छैन” भन्ने भनाइसँग टाँसिए। उनीहरूले विश्वास गरे कि केवल यहोवा मात्र उनीहरूका परमेश्‍वर, उनीहरूका मुक्तिदाता हुनुहुन्छ र त्यसैले, अन्तमा, जब परमेश्‍वर येशूको नाम प्रयोग गरेर उहाँको छुटकाराको काम गर्न आउनुभयो, तिनीहरूले प्रभु येशूले बोल्नुभएका वचनहरू सत्यका अभिव्यक्तिहरू हुन् कि वा प्रभु येशूले गर्नुभएका कामहरू स्वयं परमेश्‍वरकै काम थियो कि भनेर पत्ता लगाउन खोजेनन्, तर यसको सट्टा तिनीहरू आफ्नो अहंकारी स्वभावमा भर परे र जिद्दीपूर्वक आफ्नै धारणामा अडिए। त्यसकारण उनीहरूले प्रभु येशूको क्रूरतापूर्वक निन्दा र विरोध गरे, र अन्तमा उहाँलाई क्रूसमा टाँगे। त्यसो गरेर तिनीहरूले घोर पाप गरे र यसरी परमेश्‍वरद्वारा श्रापित भए र दण्डित भए। हामी फरिसीहरूको असफलताको पाठबाट बुझ्न सक्छौं कि, यदि हामी विभिन्न युगहरूमा परमेश्‍वरले उहाँको नाम परिवर्तन गर्ने महत्त्वलाई बुझ्न असफल हुन्छौं भने, र हामीले परमेश्‍वरको सारलाई इन्कार गर्छौं र परमेश्‍वरले नयाँ काम गर्नुहुन्छ र उहाँको नयाँ नाम छ भन्ने कारणले मात्रै यो सबै एक मात्र परमेश्‍वरको काम हो भनेर इन्कार गर्दछौं भने, तब हामी परमेश्‍वरको प्रतिरोध गर्न र परमेश्‍वरको स्वभावलाई चोट पुर्याउने कार्यहरू गर्न उपयुक्त हुनेछौं।
परमेश्‍वरलाई विभिन्न युगहरूमा विभिन्न नामहरूद्वारा किन बोलाइन्छ, र परमेश्‍वरको नामको अर्थ के हो?
परमेश्‍वरको नाम वास्तवमा मानवजातिलाई मुक्त गर्ने आफ्नो कामको कारण उदाउँछ। मानवजातिको उद्धार गर्दा, परमेश्‍वरले आफ्नो कामको आवश्यकताअनुसार र युगको आधारमा विभिन्न कामहरू गर्नुहुन्छ र फरक मनोवृत्ति व्यक्त गर्नुहुन्छ, र यसको साथसाथै उहाँको नाम पनि परिवर्तन हुन्छ। यसलाई अर्को तरिकामा भन्नुपर्दा, एउटा नामले एक युगलाई प्रतिनिधित्व गर्दछ, र यसले परमेश्‍वरको कामको एक चरण र उहाँले त्यो युगमा व्यक्त गर्ने मनोवृत्तिलाई प्रतिनिधित्व गर्दछ; परमेश्‍वरले युगहरू बदल्न र प्रतिस्थापन गर्नको लागि आफ्नो नाम प्रयोग गर्नुहुन्छ। जसरी परमेश्‍वरका वचनहरूले भन्छन्: “यहोवा र येशू एक हुनुभए पनि किन विभिन्न युगमा उहाँहरूलाई विभिन्न नाउँले बोलाइन्छ? के यो उहाँहरूका कामको युग फरक-फरक भएकोले होइन र? के एउटै नाउँले सारा अनन्तताभरि परमेश्‍वरको प्रतिनिधित्व गर्न सक्छ? यस्तो भएकोले, परमेश्‍वरलाई विभिन्न युगमा भिन्नाभिन्नै नाउँले बोलाउनुपर्छ, र उहाँले युगलाई परिवर्तन गर्न र युगको प्रतिनिधित्व गर्न नाउँ प्रयोग गर्नुपर्दछ। किनकि कुनै पनि नाउँले पूर्ण रूपमा स्वयम् परमेश्‍वरको प्रतिनिधित्व गर्न सक्दैन, र प्रत्येक नाउँले एक निश्चित युगमा परमेश्‍वरको स्वभावको अस्थायी पक्षको मात्र प्रतिनिधित्व गर्न सक्छ; त्यसले केवल उहाँको कामको प्रतिनिधित्व मात्रै गर्नुपर्छ। त्यसकारण, त्यो सम्पूर्ण युगमा प्रतिनिधित्व गर्न परमेश्‍वरले उहाँको स्वभाव सुहाउँदो नाउँ चुन्न सक्नुहुन्छ” (वचन देहमा देखा पर्नुहुन्छको “परमेश्‍वरको कामको दर्शन (३)”)। “कुनै एउटा विशेष शब्द वा नाउँमा सम्पूर्ण रूपले परमेश्‍वरको प्रतिनिधित्व गर्ने क्षमता हुँदैन, त्यसो भए के तँ उहाँको नाउँ निश्चित गर्न सकिन्छ भन्‍ने सोच्छस्? उहाँ यति महान् र अति पवित्र हुनुहुन्छ, तापनि तैँले उहाँलाई प्रत्येक नयाँ युगमा उहाँको नाउँ परिवर्तन गर्ने अनुमति दिँदैनस्? त्यसकारण, परमेश्‍वरले व्यक्तिगत रूपमा आफ्नो काम गर्नुहुने प्रत्येक युगमा, उहाँले युग सुहाउँदो एउटा नाउँ प्रयोग गर्नुहुन्छ, जसले उहाँले गर्न चाहनुभएको कामलाई समेट्छ। उहाँले त्यस युगमा उहाँको स्वभावको प्रतिनिधित्व गर्न यो विशेष नाउँ प्रयोग गर्नुहुन्छ, जसको क्षणिक महत्त्व हुन्छ। यो आफ्नो स्वभाव व्यक्त गर्न परमेश्‍वरले मानव जातिको भाषा प्रयोग गर्नुभएको हो। … सुरूमा परमेश्‍वरको कुनै नाउँ थिएन भन्‍ने तँलाई थाहा हुनुपर्छ। उहाँले केवल एउटा वा दुईवटा वा धेरै नाउँ लिनुभयो, किनकि उहाँले गर्नुपर्ने काम थियो र मानव जातिलाई व्यवस्थापन गर्नुपर्थ्यो” (वचन देहमा देखा पर्नुहुन्छको “परमेश्‍वरको कामको दर्शन (३)”)।
अब हामी परमेश्‍वरले यहोवा नाम लिनुको अर्थलाई हेरौं। परमेश्‍वरका वचनहरूले भन्दछन्: “मैले इस्राएलमा मेरो काम गर्दा ‘यहोवा’ नाउँ धारण गरेँ र यसको अर्थ (परमेश्‍वरले चुन्नुभएको) इस्राएलीहरूको परमेश्‍वर भन्ने हुन्छ, जसले मानिसलाई टिठ्याउनुहुन्छ, मानिसलाई सराप दिनुहुन्छ, मानिसको जीवनको मार्गदर्शन गर्नुहुन्छ; त्यो परमेश्‍वर जसले महान्‌ शक्ति धारण गर्नुहुन्छ र जो बुद्धिले पूर्ण हुनुहुन्छ। … यहोवा नाउँ व्यवस्थाको अधीनमा बसेका इस्राएलका मानिसहरूको निम्ति विशेष नाउँ हो। … ‘यहोवा’ ले व्यवस्थाको युगको प्रतिनिधित्व गर्नुहुन्छ, र यो इस्राएलको मानिसहरूले आराधना गर्ने परमेश्‍वरको निम्ति आदरार्थी कुरा हो” (वचन देहमा देखा पर्नुहुन्छको “मुक्तिदाता पहिले नै ‘सेतो बादल’ मा फर्किसक्नुभएको छ”)। “यहोवा” परमेश्‍वरले व्यवस्थाको युगमा आफ्नो काम पुरा गर्न लिनुभएको नाम हो, र यसले परमेश्‍वरको भव्य, क्रोधित, श्रापित र दयालु स्वभावको प्रतिनिधित्व गर्दछ। त्यस समयका मानिसहरूलाई परमेश्‍वरको उपासना कसरी गर्ने भनेर थाहा थिएन, न त उनीहरूलाई यस पृथ्वीमा कसरी जीवन बिताउने भनेर थाहा नै थियो। यद्यपि तिनीहरूले परमेश्‍वरको नजरमा नराम्रो हुने कामहरू गरे तापनि, तिनीहरू यस बारे पूर्ण रूपमा अनजान थिए, र त्यसैले परमेश्‍वरले मोशामार्फत, पृथ्वीमा तिनीहरूका जीवनमा मानवजातिलाई डोर्याउन व्यवस्था र आज्ञाहरू घोषणा गर्नुभयो। उहाँले मानिसलाई व्यवस्था र आज्ञाहरू कडाईका साथ पालन गर्ने माग गर्नुभयो, र उहाँले उनीहरूलाई कसरी परमेश्‍वरको उपासना गर्ने भनी जान्न, र के असल छ र के पापमय छ भनी जान्न दिनुभयो। यदि मानिसहरूले व्यवस्था र आदेशहरू पालन गर्थ्यो भने, तब उनीहरूले यहोवाको अनुग्रह र आशिष्‌ प्राप्त गर्न सक्ने थिए; यदि तिनीहरूले व्यवस्था र आज्ञा उल्लङ्घन गर्थ्यो भने, तब तिनीहरू स्वर्गीय आगोले भस्म हुने थिए वा ढुङ्गाले हानेर मारिने थिए। यहोवाको मार्गदर्शनमुनि, इस्राएलका साधारण मानिसहरूले व्यवस्थाको सम्मान गरे र यहोवाको नाम उच्च पारे र तिनीहरूले हजारौं वर्षसम्म परमेश्‍वरबाट निरन्तर आशिष्‌ र मार्गदर्शन पाए।
अनुग्रहको युगमा, परमेश्‍वरको नाम येशूमा परिवर्तन भयो, र यसमा पनि गहन महत्त्व रहेको छ। परमेश्‍वरका वचनहरूले भन्दछन्: “‘येशू’ इम्मानुएल हुनुहुन्छ, जसको अर्थ प्रेमले पूर्ण र करूणाले पूर्ण पाप बलि भन्ने हुन्छ र जसले मानिसलाई उद्धार गर्नुहुन्छ। उहाँले अनुग्रहको युगको काम गर्नुभयो, र उहाँले अनुग्रहको युग प्रतिनिधित्व गर्नुहुन्छ…। येशूको नाउँ अनुग्रहको युगका मानिसहरूलाई नयाँ जन्म दिन र मुक्त गर्न अस्तित्वमा आयो, र यो समग्र मानवजातिको उद्धारको निम्ति एउटा विशेष नाउँ हो” (वचन देहमा देखा पर्नुहुन्छको “मुक्तिदाता पहिले नै ‘सेतो बादल’ मा फर्किसक्नुभएको छ”)। व्यवस्थाको युगको अन्तमा, मानवजाति शैतानको कारण झन् झन् भ्रष्ट हुँदै गइरहेको थियो। उनीहरूले व्यवस्थाहरू पालन गरेनन्, तिनीहरूका पापहरूको प्रायश्चित गर्नका निम्ति पर्याप्त उनीहरूले गर्न सक्ने कुनै पापबलि थिएन र उनीहरूले कुनै पनि समयमा व्यवस्थाद्वारा दोषी ठहर्याइने र मृत्युदण्ड दिइने खतराको सामना गरे। मानिसको पापहरू हटाउन र मानिसलाई बाँच्न सक्षम बनाउन, परमेश्‍वर संसारमा मानव पुत्रको रूपमा देहधारण हुनुभयो, र छुटकाराको कामको एक चरण पुरा गर्न र प्रेम र कृपालाई प्राथमिकता दिने स्वभाव व्यक्त गर्न उहाँले येशू नाम लिनुभयो। प्रभु येशू मानवजातिको खातिर क्रूसमा टाँगिनुभयो, यसरी उहाँ आफैले मानवजातिको पापहरू लिनुभयो र मानवजातिको निम्ति पाप बलि हुनुभयो। जबसम्म हामी प्रभु येशूलाई हाम्रो मुक्तिदाताको रूपमा स्वीकार गर्दछौं, र प्रभु येशूको नाममा प्रार्थना, स्वीकार र पश्चात्ताप गर्दछौं, तब हाम्रो पापहरू क्षमा हुन्छन्, हाम्रा आत्माहरू शान्तिमय र सहज हुन्छन्, र हामीलाई प्रभुले दिनुहुने अनुग्रह र आशिष्‌हरू प्राप्त गर्न सक्षम हुन्छौं।
यसबाट हामी देख्न सक्छौं कि परमेश्‍वरको हरेक नामले त्यो विशेष युगमा परमेश्‍वरले पुरा गर्नुहुने काम र उहाँले व्यक्त गर्नुहुने स्वभावलाई प्रतिनिधित्व गर्दछ। जब परमेश्‍वरले मानवजातिको आवश्यकताअनुसार नयाँ कार्य गर्नुहुन्छ, परमेश्‍वरको नाम पनि यसको साथमा परिवर्तन हुन्छ र, उहाँको नयाँ नामलाई स्वीकार गरेर मात्र हामी परमेश्‍वरको थप मुक्ति प्राप्त गर्न सक्दछौं। उदाहरणका लागि, अनुग्रहको युगमा, यदि परमेश्‍वर येशू नभई, यहोवा नामको साथमा आउनुभएको भए, तब परमेश्‍वरको काम व्यवस्थाको युगमा अड्किन्थ्यो। हामी भ्रष्ट व्यक्तिहरूको रूपमा प्रभु येशूको छुटकारालाई स्वीकार गर्न असक्षम हुने थियौं, र व्यवस्थाको उल्लंघन गरेकोमा परमेश्‍वरद्वारा दोषी ठहरिने र दण्डित हुने थियौं।
अहिले नै आखिरी दिनहरूको अन्त्य हो, र दाजूभाइ तथा दिदीबहिनीहरू सबैले प्रभु येशू ख्रीष्टको दोस्रो आगमनको लागि उत्सुकतासाथ तिर्सना गरिरहेका छन्, र उनीहरू प्रभुले उनीहरूलाई उठाइन र स्वर्गको राज्यमा तिनीहरूलाई स्वागत गरिनको निम्ति पर्खन्छन्। “मैले तिमीहरूलाई भन्‍नुपर्ने कुराहरू धेरै छन्, तर अहिले तिमीहरूले ती सहन सक्‍दैनौ। तैपनि, जब उहाँ, अर्थात् सत्यका आत्मा आउनुहुन्छ, उहाँले तिमीहरूलाई सारा सत्यतामा अगुवाइ गर्नुहुनेछ: किनभने उहाँ आफ्‍नो तर्फबाट बोल्‍नुहुनेछैन; तर उहाँले जे सुन्‍नुहुन्‍छ उहाँले त्यही बोल्‍नुहुनेछ: र उहाँले तिमीहरूले आउनेवाला कुराहरू देखाउनुहुनेछ” (यूहन्‍ना १६:१२-१३)। र प्रकाशको अध्याय २ र ३ मा, धेरै पटक भविष्यवाणी गरिएको छ कि: “आत्माले मण्डलीहरूलाई के भन्‍नुहुन्छ सो, कान हुनेले सुनोस्।” र पत्रुसको पहिलो पत्रको अध्याय १, पद ५ ले भन्दछ: “जसलाई अन्तिम समयमा प्रकट गरिन लागिएको मुक्तिमा परमेश्‍वरको शक्तिद्वारा राखिन्छन्।” यी पदहरूबाट हामी बुझ्न सक्दछौं कि प्रभुले आखिरी दिनहरूमा फर्कनुहुँदा भन्नुपर्ने अझ धेरै कुरा हुन्छ र उहाँले हामीलाई सबै सत्यताहरू बुझ्न र आखिरी दिनहरूको परमेश्‍वरको मुक्ति प्राप्त गर्न सक्षम पार्नुहुनेछ। त्यसोभए, जब प्रभु येशू फर्कनुहुन्छ र आखिरी दिनहरूमा आफ्नो काम पुरा गर्न देखा पर्नुहुन्छ, उहाँको काम परिवर्तन हुनेछ, तर के उहाँको नाम पनि परिवर्तन हुनेछ? उहाँ फर्किनुहुँदा पनि के उहाँलाई अझै पनि येशू भनिनेछ? यो प्रकाशको पुस्तकमा भविष्यवाणी गरिएको छ कि: “जसले जित्छ उसलाई मैले मेरा परमेश्‍वरको मन्दिरको खम्बा बनाउनेछु र ऊ त्यस उप्रान्त बाहिर जानेछैन: र म उसमा मेरो परमेश्‍वरको नाउँ र मेरो परमेश्‍वरको सहरको नाउँ लेख्नेछु, जुनचाहिँ स्वर्गका मेरो परमेश्‍वरबाट तल आउने नयाँ यरूशलेम हो: र म उसमा मेरो नयाँ नाउँ लेख्नेछु” (प्रकाश ३:१२)। पवित्र शास्त्रको यस खण्डले भन्छ कि आखिरी दिनहरूमा जब उहाँ फर्किनुहुन्छ, परमेश्‍वरको नयाँ नाम हुनेछ र, उहाँको नयाँ नाम हुनेछ भनी देखेर, तब उहाँलाई अबदेखि येशू कहलाइनेछैन। यसको लागि हामीलाई परमेश्‍वरको भय मान्ने हृदय चाहिन्छ, र जब परमेश्‍वर आफ्नो नयाँ काम गर्न आउनुहुन्छ र उहाँको नयाँ नाम हुन्छ, हामीले खुला मनले खोज्नुपर्दछ र विवेकको साथ अध्ययन गर्नुपर्दछ, र हाम्रो आफ्नै धारणा र कल्पनाहरूद्वारा परमेश्‍वरको नाम सीमित गर्नुहुँदैन। यस तरीकामा मात्र हामीसँग प्रभुको पुनरागमनलाई स्वागत गर्ने मौका हुनेछ।
हामी परमेश्‍वरको अन्तर्दृष्टि र मार्गनिर्देशनको लागि धन्यवाद दिऔं, र परमेश्‍वरको देखा पर्ने घटनाको निम्ति तिर्सना गर्ने र खोज्ने सबै दाजूभाइ तथा दिदीबहिनीहरू चाँडै नै प्रभुसँग पुनर्मिलन हुन सकोस्!
अघिल्लो: इसाई चिन्तन: के हामीले वास्तवमै उहाँ स्वयमलाई प्रकट गर्ने प्रतिक्षा गर्दै फर्केका प्रभुलाई ग्रहण गर्न सक्दछौं?
अर्को: इसाई साक्षी: उनको छोराको क्यान्सर सामना गर्दा, उनले परमेश्‍वरमाथि भरोसा राख्छिन् र उहाँका कामहरूका साक्षी दिन्छिन्